रवि र रेखा एयरपोर्ट पुगेर गरे यस्तो घोषणा ! - Sabal Post
रवि र रेखा एयरपोर्ट पुगेर गरे यस्तो घोषणा !
काठमाडौं – रबि लामिछाने र रेखा थापाले विमानस्थलमा विदेशबाट नेपाल आएका नेपाली युवाहरुको समान जफत गरेको विषयमा कडा रुपले बिरोध गरेका छन। वर्षौ बैदेशिक भूमिमा परिश्रम गरेर घर फर्किने बेला आफ्ना आफन्त आमाबुबालाई ल्याएको केहि कोशेली पनि विमानस्थल मै जफत हुन थालेपछि त्यसको कडा प्रतिरोध गरेका हुन। रेखा थापा लेख्छिन – उनिहरुको कमाइले किनेको नासो देखेर यत्ती जलेको किन होला र तिनै युवाको पसिनाको रेमिट्यान्स बाट चलेको देशमा उनिहरुको आगमनमा लुट मच्चाउन किन परेको छ । सक्नेले र हुनेले क्विन्टल सुन छिराउने एयर्पोर्टको कहानी जनताले थाहा पाएका छन ।
क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन छिर्दा नदेख्ने भन्सार गरीब नेपालीले ल्याएको एक टुक्रो सुनमा आँखा गाड्दै छ, के यो सुहायो ? कोही कोही मानिस मदिरा बाहेक अरु सामानमा कडाइ नगरे हुन्थ्यो भनिदिएका छन् । घर परिवार साथी भाईका लागि ल्याएको १-२ बोतल रक्सी नि रोक्नु ? सुट लाएका, धनी मानिहरुले २-४ सय जोगाउन सुटकेश भित्र रक्सीका बोत्तल मजाले ल्याउँछन् ।
रक्सी सेवन नगराँै यो कुरा पछि गरौँला । यसका विरुद्ध कुन कुन कानुन आकर्षित हुन्छन्, लगाआँै तर गरीब नेपालीको लगेज मात्र होइन अण्डरवेयर नै चेक गर्ने सुकिला मुकिलालाई नमस्ते र सलाम ठोक्ने, चेक नगर्ने जस्तो विभेद गलत हो । कुरा उठी हाल्यो, अब यो पनि सुन्नुस् । खैरो छाला भएको, अत्तर वास्ना आउने कुइरे, कुइरिने चाँही सर र म्याडम अनि मेहनतको पसिना, वासना आउने नेपालीलाई चाँही ओइ भनेर सम्बोधन, रुखो स्वर, गोलभेडा जत्रो आँखा ?
तर मुस्कानसहितको कष्टमर सर्भिसचाँही कफी र पाउरोटी वालाले लान्छ । जति दुख गरेपनि दिल खोलेर पैसा खर्च गर्न नेपालीलाई कसैले सक्छ ? देश भरीका सपिङ सेन्टर, रेष्टुरेण्ट, बार फन पार्क यस कारणले चलेका छन् कि नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरुले विदेशमा पसिना बगाएका छन् । विदेशमा दुख गरेर जन्मथलो आउने नेपालीलाई अरु कसैलाई भन्दा बढी सम्मान दिनु पर्छ ।
यो देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने यस्ता नेपाली हुन भिभिआइपी । कामदार मात्र होइन उच्च शिक्षा लिएर फर्केका नेपालीलाई समेत भिभिआइपी ट्रिट गरिनुपर्छ । केही एयरपोर्ट कर्मचारी तथा विदेशमा रहेको एरलाइन्स स्टाफहरुको मिलेमत्तोमा नेपालीहरुलाई सुन, मोवाइल जस्ता सामान बोकाएर पठाइन्छ । यता एरपोर्ट झर्ने वित्तिकै एउटाले कलेक्सन गर्छ । यसमा धेरैको मिलेमत्तो छ । हो यो कुरामा बरु ध्यान दिनु प¥यो । २ करोडको लोभमा, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आफ्नो देशको एयरपोट भन्सारमा नाङ्गे झार पार्न जनताको सरकारलाई सुहाउँदैन ।
उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस : ”दुबई, कतार, मलेशिया लगायत देशमा हाम्रा दाइभाइ पसिना बगाइरहेका आफ्नै आँखाले देखेको छु । ती श्रम क्याम्पमा बस्दा हुने अनुभुती नजिकबाट सुनेकि छु । जब वर्षौ पछी घर फर्किने सुखद दीन आउछ, आफन्त र घररिवारको लागि खुशीको स साना उपहार लिएर फर्कन चाहनु स्वाभाबिक हो । दुइवटा फोन ,एइटा टि.भी वा त्यस्तै अरु सामान, निर्धा जनताले मिटर ब्याज तिरेर पराइ देश जान परेकोमा दया नभएको सरकार उनिहरुको कमाइले किनेको नासो देखेर यत्ती जलेको किन होला र तिनै युवाको पसिनाको रेमिट्यान्स बाट चलेको देशमा उनिहरुको आगमनमा लुट मच्चाउन किन परेको छ । सक्नेले र हुनेले क्विन्टल सुन छिराउने एयर्पोर्टको कहानी जनताले थाहा पाएका छन ।
“त्यही युबाहरुको रेमिटेन्सले तपाईंको तलब आउछ , अनि तेहि तलब खाएर तिनै युबा हरुको सामान जफत गर्न मिल्छ?” बिदेशमा भयका युवाहरुको दुख पिडाको कुरा रबि लामिछाने ले सुनिदिनु पर्ने मिडिया मा उस्ले नै बजाउन पर्ने? बिदेस मा बेचियका चेली हरु को उदार आङकामी सेर्पा दाइ जस्ता अन्य अरु समाज सेबि हरु ले निकाल्दिनु पर्ने ? काठमाडौ र बाहिर को फोहोर बस्तु केपि खनाल जस्ता अन्य अरु युवाहरु ले देस सरसफाइ गर्दिनु पर्ने ? दुखि पीडित बेसाहारा लाइ इसा गुरुङ सामाज्सेबी लगाय्त अरुले सहयोग संकलन गरेर उदार गरिदिनु पर्ने?
विकट ठाँउ मा पानी लिन जान पनि घन्टौ हिन्नु पर्ने, भारत बाट अरौबौ को प्याज आलु आयत गरेर खानु पर्ने, देश मा बन्द हडताल हुदा मर्नु पर्ने पनि हामी नै, गाउ घर मा मानिस बिरामी हुदा एमबुलेनस नपायर बिरामी लाइ डोको हालेर पुराउनु पर्ने हामि जनता ले नै ।!
हिन्दू राष्ट्र माग गर्नेहरूको हस्ताक्षर सानेपा पुग्यो…
असोज १९ गतेबाट बुटवलमा प्रर्दशनी